ITIL Vs PMP Certification? Ndezvipi zvakakunakira iwe? - ITS Tech School
Izvo zvose PMP Certification (Project Management Professional) uye ITIL Certiification (Information Technology Infrastructure Library) inosarudzwa. Chimwe Chevhisi chinokwanisa kukupa basa rakakwirira nemari mikuru.
Zvakadini nekutanga nezvinobatsira zvePPP certification. Paunotanga kuendesa mberi basa iri richiburuka, zvinotora zvakawanda zvekutsungirira uye kuvimbiswa.
Izvo zvingaita, kubuda nekakarurama kunogona kubatsira munhu kufambira mberi nokukurumidza, iwe unogona kufungidzira izvi apo PMP chiyeuchidzo chinova chinhu chinokosha uye inoita zvinhu zvishoma zvishoma zvinoda kupfuura iwe pane chero pfungwa. A ichokwadi mune PMP inosimudzira maitiro ekutarisira kweprojekti uye inoita kuti iwe uve nehuwandu hwehutano huri nani huri maererano nehutungamiri hwemadiki uye kutarisira mapurojekiti. Tsvaga humwe hufumi hwakanakisisa hwekuzviwana iwe wakagadzirirwa neChirongwa chePPP.
Kuwedzera Kukura Mumabasa Ako
Iko PMP chirongwa chekudzidzisa ibasa rose rakagamuchirwa uye rinonzwisiswa neboka rose revanhu veGuru. Muchikamu cheI IT, dzimba dzakawanda dzemakambani dzakamirira vatungamiri vePPP vakavimbiswa uye izvi zvinogona kuvandudza huwandu hwenyu hwebasa rinopfuura iwe.
Munhu mumwe nomumwe muhutano huri pachena haazive zvinobatsira zvehurongwa hwehutungamiri uye kuti hunovandudza sei zvinobatsira pakushanda. Paunotendeurira PMP unotsigira unyanzvi, une chido chekubatana nevanhu vanoita dzidzo uye avo vakangobvumirwa nekutsigirwa kwePPP. Izvi zvinonyatsovandudza kuparidzira kwako uye marashi kushanda senyanzvi paunenge uchikupa mukana wokutora kupfura kwakanyanya pane zvakasvika pakatarisana nesarudzo dzebasa.
Kuvandudza Muzinga Wekwanisi
Hazvisi nyore sezvinonzwika kutora unhu uye nenzira yakafanana iwe unofanirwa kunyatsogadzirira. Panewo saizvozvo toni yebasa inobatanidza nemitemo yebasa redzidzo. Iwe unowana mukana wekugadzirira uye unowedzera kuwedzerwa mumutauro wakawanda purojekiti utariri framework. Kuparadzaniswa kwemuitiro uyu kunosanganisira
Nokudaro, unowana mukana wekutora muhutano hunotevera hwehutungamiri hwemapurogiramu hunogona kunge pasina huwandu hwekutambanudza huripo huripo mumishandiro ako ezuva nezuva ehurongwa hwekuvandudzwa kwehuwandu uye yekuita basa.
Kuvandudzwa kweMakambani Avapo
Iwe uchava nekwanisi yekutsvaga masangano makuru pasi rose rinoshanda rinopoteredza zvikamu zvakasiyana-siyana, izvi ndezvechikonzero chebvumirano ichavandudza unyanzvi hwako hwemhizha uye unofanirwa purojekiti yako yehutano yekuungana. Iwewo uchabatana nevamwe vanhu vari chikamu chemakadziro akadaro, unogona kunyatsotora hurukuro, uye kuungana kunovabatsira iwo ruzivo kuburikidza neunyanzvi hwako.
Degree Kuti Uwane Mari Iri nani
Zviri pachena, zvinoreva kuti PMP chiyeuchidzo ichakupa mukana wekuva mukuru wekugadzira mhizha kune vanhu vasiri vimbiso. Apo iwe unonyatsowana dhigirii, iwe uchatanga kuona kuwedzera kukwira nekuwedzera kuripa.
Nhigiri yeUniversity Project Project Managerial Skills
Izvi zvinogara zvichipiwa kana iwe uchiuya wakasungwa pamwe nePPP chiyeuchidzo. Imwe mutungamiri wepurojekiti inoda kudzora chiyero chikuru chezvinhu uye zviduku zviduku zvinoshandiswa nezvikamu zvakasiyana-siyana pamusoro peprojekiti uye kuparadzaniswa kwechirongwa chePPP kunorayirirwa zvakadai kuti kune kuwedzera kunobudirira mumushandi wepurojekiti yeprojekti.
Ngationei kuti tinzwisise izvozvo nehuwandu hwekuwedzera huwandu hwemashoko, bhizinesi rimwe nerimwe rinotarisirwa kutarisana nekuvandudzwa kwekutsvaga. Pakave nekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana kusvika kune Kutungamirirwa kweTI masimba. Kutarisana nematambudziko akadaro, ITIL kana hutachiona hwekuchengetedza mabhuku mabhuku ehutano hwakatanga kutora nzvimbo inonyatsozivikanwa mubhizinesi. Iyo ITIL cert inoparadzaniswa pakati pe ITIL nheyo, ITIL mukati uye ITIL nyanzvi dzehutano.
Pfungwa dzinofadza zvechirongwa ndezvekuti bounty. Muchiitiko apo mukuru anopiwa neTIL ruzivo, achave ari kunyanya kuita sangano sezvo achigona kunyatsojekesa kushanda kwebasa uyezve kuwedzera kuronga kwezvinhu munzira dzisinganzwisisi chimwe chinhu. Icho chiyeuchidzo chichagadzirisawo zvakananga kumucheto wepamusoro kusvika pakuve nyanzvi, mutungamiri kana kunyange nevanopa mazano.
Pachiitiko icho chakagadzirirwa chiziviso, iwe unonyatsoratidza kuratidzika kwehutano hwemabasa kusvika kune mumwe munhu anotyaira kuti arambe ari pamberi pevamwe muItatu kukamukana. Izvi zvinoita kuti iwe uwane zvinhu zvinorumbidzwa. Nekupedzisira kweIIT certification, vatariri vane chido chekuwedzera kudzidziswa, vashandi uye vanobudirira maererano nekutamira kunheme yekuita tsika yekuita muIt specialty. NeIIT certification, iwe unotanga kutaurira mutauro unowanikwa mune zvehutano hwehutano hwakapoteredza uye naizvozvo, unotanga kupinda webhu yeimwe nzvimbo yakagadziriswa uye kumwe kusungirirwa kusvika paIt kukwanisa.
Vatungamiriri vakapiwa neIIT chiziviso uye ruzivo ruchaenda mberi kusvika pakupedzisira kunonyanya kukosha kune sangano rimwechete sezvo vachigona kunyatsorongedza dhidhi dzose dzekuuraya mairi. Kuita zvakadai zvakadai, nepo nekukwanisawo kutarisa nguva yekuita uye magwaro mukati memasangano uye nevatengi, rubatsiro rwe ITIL cert spun mikana. Kungofanirwa kuve wakanzwisisa, iwe unofanirwa kujekesa kuti ITIL chiziviso chinonyanya kudarika nhu rakaoma kuzarura kupfuura PMP chiyeuchidzo. Ikokupedzisira inonyadzisa zvikuru nenzira iyo inotora urongwa hwakakura hwebasa rakaoma uye kunyatsogadzirira pamagumo ako.
Muzvimwe zviitiko, zvechokwadi, chiyeuchidzo chokusarudza ndicho chikonzero chakagadzirisa uye zvichange chakavimbika chichivimba nechiedza chezvakananga iwe wakangwarira mubasa rako re IT. Izvi zvinonzwisisika pane zvikonzero kuti munhu mumwe nomumwe anozviisa pazvinangwa uye anotumira zvinangwa.
Unogonawo kutarisa: -ITIL Certification Career Opportunities
Iwe unofanira kufungisisa uye kuziva kuti kunyatsotevedzwa kunofanira kukugonesa sei kukwanise zvinangwa zvebasa uye nekuvandudza nguva nenguva. Ocarreer mikana inenge iripo yekuti iwe unoda imwe chiziviso chinokutadzisa iwe kuratidzira ruzivo mune zvakakodzera chirongwa chekuita iwe unogona kunge usina kunyanya kuenda kune PMP.
Chero mamiriro ezvinhu, kana iwe uri kutarisa pfungwa dzakananga maererano neI-based Based Management iwe unogona kuenda chaizvo kune ITIL, pane PMP. Izvo zvipupuriro zviviri hazvikwanisi kuva ne musoro kumusoro wekugadzirisa sezvo vane zvinangwa zvakasiyana uye maitiro akaparadzana anoshanda. Inotenderera kwauri iwe semudzidzisi weTI uye somunhu, kugadzirisa pane chidzidzo chakadzidziswa.
Nzira yakanakisisa yekuwana PMP Certification mu 2018 - Study Notes, Tips uye PMP® Exam Update